Global Voices teny Malagasy · 11 Novambra 2018
Tantara tamin'ny 11 Novambra 2018
Azia Atsimo: Fihetsehampo Voalohany tamin'ilay Horohorontany
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana11 Novambra 2018
Nisy horohorontany nahatratra ny maridrefy 7.6 Richter nikapoka an'i Azia Atsimo androany maraina, i Kashmir no foibeny. Maneho ny fihetsehampony ireo bilaogy.
Venezoela: Valinkafatry ny fifidianana
Amerika Latina11 Novambra 2018
Samy manana ny fanehoankeviny avokoa ireo blaogera manoloana ny fifidianana niseho tamin'ny Alahady farany teo tany Venezoela. Teo ny nitsikera, teo kosa ny nanohana.
Venezoela: Fanoherana Mba Hanaovana Ny Fifidianana Savaranonando
Na dia mankalaza ny fanapaha-kevitry ny vondrona mpanohitra aza ny sasany, mbola misy ihany ireo manahy mikasika ny fangaraharahan'ny fifidianana [...] noho ny fanambaràna izay milaza fa hodorana eo noho eo ireo vato rehefa vita ny fanisàna
Bolivia: Fitorian-teny Fanelezana ny Blaogy
Noho ny fahombiazan'ilay Andiany Faharoa Fihaonan'ny Blaogera sy ireo Mpampiasa Mundo al Reves natao tamin'ny Asabotsy 8 Jolay lasa teo tany Santa Cruz izay nandraisan'ny olona 26 anjara (indrindra blaogera sy mpamaky blaogy), nanomboka hetsikana blaogera mitondra ny lohateny hoe ''Adalanà Blaogy'' ilay vondrona mavitrika.
Misafidy i Ekoatora
Taona nisiana fifidianana niteraka adihevitra sy noresahina be manerana an'i Amerika Latina iny. Raha toa ka misento amin'ny fahatoniana ireo mpanaramaso ny fifidianana taorian'ilay famaranana taraiky ny fandresen'i Felipe Calderón izay niteraka adihevitra be tany Meksika, efa fotoana sahady hieritreretana an'i Brezila, Venezoela, Nikaragoa sy i Ekoatora izao;
Medellin, Kolombia: Avy Any Amin'ny Renivohitriny ny Fakàna An-keriny Lasa Tanànan'ny Fanavaozan-kery
Mitovy dika amin'ny hoe zava-mahadomelina, Pablo Escobar, vondrona marksista mpiady anaty akata, ary maka tàhaka miaramila mahery setra maro i Medellin Kolombia. Fa nandritra ireo folo taona lasa, lasa malaza tsara ary fanta-daza noho ny traikefany ara-tsosialy izay anisan'ny tena mangirika indrindra ao Amerika Latina. Ao anatin'ity fizarana voalohany amin'ny...
Palestina: Hatezerana Noho ny Nahafatifaty Fahatany Zazalahy kely Iray
Israely11 Novambra 2018
Araka ny tatitra iray nataon'ny BBC News, nitifitra zazalahy kely iray 10 taona ireo miaramila israeliana ary nahafaty azy nandritra ny fihetsiketsehana nanoherana ny sakana najoro tao Naalin. Na dia nitifitra an'ireo mpanao fihetsiketsehana hafa tamina bala fingotra aza ireo miaramila ary nandratra olona 18, io zazalahy kely io irery no...